Iflethi okanye indlu ekwicomplex - iComo Lake - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex - iComo Lake
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSimone Andrea
Indawo yokuphosa amatye ukusuka eLake Como yindawo yokuzalwa yeGuest House Mannan, indawo entle yokuhlala yabantu abayi-4, enegumbi elikhulu lokuhlala elinekhitshi, igumbi lokulala elilala abantu ababini, igumbi lokuhlambela kunye nelaphu elihle. Kwimizuzu embalwa xa uhamba ngeenyawo ungafikelela kwezona zinto zinomtsalane zaseComo ezifana nechibi, iVilla Olmo, imoto eya eBrunate, iImbarcadero, isikhululo seComo Lago sokudibana neMilan. Irhafu yabakhenkethi eyi- € 2 umntu ngamnye ngosuku ayifakwanga.
Iflethi imalunga ne-70 sqm, equka igumbi lokuhlala elinekhitshi elixhotyisiweyo ( i-microwave, ifriji, i-deep freezer, umatshini wokwenza ikofu, iketile, njl.). Le ndawo yokuhlala izilungele iintsapho okanye amaqela abahlobo.
4.60 out of 5 stars from 150 reviews
4.60 · Izimvo eziyi-150
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi150
Iflethi ingaphandle kweZwagen, kulula ukuyifikelela ngemoto, ngebhasi okanye ngetreyini, ibe isikhululo seComo Lago phambi kwendlu. Indawo yokubhaka nevenkile ye-ice cream zisezantsi. Ichibi likumgama weemitha eziyi-200, kwaye iDuomo ikumgama weemitha eziyi-100 ukusuka kwiflethi.
Umbuki zindwendwe ngu- Simone Andrea
Ndifumaneka ukuze ndifumane inkcazelo ngeComo neLake, okanye naliphi na icebiso ngendawo yokutyela okanye iindawo endinokuya kuzo. Ndikhangele phambili ukukubona!
Inombolo yomthetho: 013075-CNI-00906
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Como